बसाई सर्नेको लहरले रित्तो बनेको एउटा गाउँको कथा  Clickmandu
बसाई सर्नेको लहरले रित्तो बनेको एउटा गाउँको कथा
रिपेश दाहाल २०७५ पुष २४ गते १२:३४ मा प्रकाशित
हेटौँडा । हेटौँडाको एक कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपञ्छी विकास मन्त्री चक्रपाणि खनालले देशमा ३८ प्रतिशत कृषियोग्य जमीन बाँझो रहेको र त्यसलाइ फेरि खनजोत गर्नुपर्ने विचार राखेकै दिन गढी गाउँपालिका–६ का नवराज घिमिरे एउटा गाडीमा झिटीझ्याम्टा लाद्दैै थिए ।
गाउँका छिमेकीहरु सबै गाउँ छाडेर गएपछि उनको परिवार गाउँमा लगभग एक्लो हुन पुग्यो । यसरी गाउँमा एक्लिनु परेपछि आफू पनि गाउँ छाड्न बाध्य भएको उनको दुःखेसो थियो । गाउँको झण्डै ३० रोपनी जग्गा छोडेर काठमाडौँको कुनै नर्सरीमा काम गर्ने गरी जान लागे घिमिरेले भने – गाउँमा छिमेकी नै नभएपछि कसरी बस्नु ?
घिमिरेका अनुसार उनको परिवार पनि बसाइँ सरेपछि सिमसार भन्ने यस गाउँमा अब तिमल्सिना बाको एक्लो घर मात्रै हुनेछ ।
गढी–६ को सिमसार भन्ने गाउँमा केही वर्ष अघिसम्म पनि चार÷पाँच घरको ढकाल टोल, तीन÷चार घरको आचार्य टोल, त्यति नै संख्याका घिमिरे टोल, तिमल्सिना टोल जस्ता स–साना टोलसहितको रमाइलो गाउँ थियो भन्छन् छिमेकी गाउँका वृद्ध कृष्णप्रसाद तिवारी । तर, आज भीमप्रसाद तिमल्सिना र कृष्णप्रसाद घिमिरे बाहेक कसैको पनि गाउँमा बसोबास छैन । बस्ती नभएपछि र नियमित मर्मत सम्भार हुन नपाएपछि ठूला गाडीहरुसमेत चलिसकेको बाटोमा आजभोलि मोटरसाइकलसमेत लान सकिँदैन ।
हिजो धान, मकै, गहँु, कोदो, तोरी, मास, भटमास जस्ता अन्नबाली मात्र होइन निबुवा, कागती, बोडी, सिमी, आलु, प्याज तथा राजमा जस्ता नगदे तरकारी बालीहरु प्रशस्तै लगाउन सकिने ठाउँमा आज बहिर्गमनका कारण सिर्जित जैविक असन्तुलनले उत्पादन लगभग शून्य भएको छ । अन्नबाली उम्रन्छन् तर वन कुखुरा तथा चराचुुरुङ्गीबाट जोगाउन सकिन्न । फलेका फल मृग, बाँदर, स्याल तथा बँदेलहरुबाट जोगाउन सकिन्न ।
‘लोकल कुखुरा खोरबाटै स्यालले झिकेर लान्छ, बाँदरहरु घरभित्र छिर्छन्, अनि गाउँमा बसेर के गर्नु ?’ घिमिरे भन्छन् ।
गाउँका सबै बसाइँ सरेर आफ्नो परिवार एक्लिनु परेपछि उनको परिवारले पनि बसाइँ सर्ने निर्णय ग¥यो ।
‘नजीकको गाउँ बाग्दलीमा घर बनाउँदै छौं, अब त्यतै सर्ने हो, खेतबारीबाट पनि आम्दानी छैन, कमाउन त प¥यो भनेर आफन्तको नर्सरीमा काम गर्ने गरी काठमाडाँैं जान लाग्या,’ उनले प्रष्ट्याए ।
केही वर्ष वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा साउदी अरबको एउटा कम्पनीमा काम गरेपछि उनलाई नेपालमै गएर पशुपालन गर्न मन लाग्यो ।
‘म पशुपालन गर्न भनेरै समय भन्दा अघि नेपाल आएँ, तर, गाउँ नै खाली देखेपछि व्यवसाय गर्न मनै लागेन,’ उनले भने ।
नवराज घिमिरे मात्र हैन उनको आफ्नै भाइ सुदर्शन घिमिरे पनि इजरायलमा एक वर्ष कृषिसम्बन्धी अध्ययन गरेर यहीँ कृषिमा केही गर्न सकिन्छ कि भनेर आए । काम गर्ने वातावरण नपाएपछि अब सोचै बदलिएको उनी बताउँछन् ।
साँच्चै नै सिमसारको हालत त्यस्तै छ । हिजो ५० घर भएको गाउँमा आज एक घर छ । दुई किलोमिटरको दूरीमा बल्ल एक घर भेटिन्छ । झण्डै झण्डै जङ्गलको बीचमा घर हुन पुगेको छ । अब त्यहाँ केवल हिजो गाउँ थियो भन्ने चिन्ह मात्रै जीवित छ ।
हिजो बालकहरुले खेल्न बनाएका चौरहरु, विभिन्न खेल खेल्न बनाएका डोबहरु, खेलौना गाडी कुदाउने सडक सबै छन् तर निर्जीब झै छन् । युवाले भलिबल खेल्न बनाएका मैदान वर्षाैं नजोतिएको बारीका पाटा झैंं भएका छन् । बूढापाकाहरु सुस्ताउन बनेका चौतारीहरु छन् तर लेउ लागेका । कुवा छ तर, वनमाराले ढाकिएको । घरहरुका अवशेष लगभग विलीन हँुदैछन् । खेतका गराहरुमा खर र घाँसहरु फुलिरहेका छन् । अर्थात, धानबारीहरु लगभग खरघारी बनिसकेको छ ।
छिमेकी गाउँका वृद्ध कृष्णप्रसाद तिवारीले भने – ऊ त्यो खरघारीे भएको जग्गा रामशरणको हो । उसको अहिले हेटौँडामा मासु पसल छ । अनि, माथिपट्टि थोत्रो घर देखियो नि, त्यो चाहीँ ढकाल्नी यशोदाको हो । त्यहाँ ढकालहरुको तीन÷चार वटा घर थियो । अहिले कोही पनि बस्दैनन् ।
गाउँका डिल्ली चौलागाईं, रामशरण घिमिरे, गोकुल आचार्य, रमेश आचार्य, कृष्ण आचार्य, राजु तिमल्सिना, यशोदा ढकाल, मानबहादुर तिमल्सिना, बद्री ढकाल, अर्जुन घिमिरे, ठाकुर ढकाल, गोविन्द घिमिरे, केशव ढकाल, शंकर ढकाललगायत थुप्रैको बसोबास गाउँमा छैन । घिमिरेका अनुसार कतिपय सुविधा खोज्दै हेटाँंैडा, काठमाडौँ, चितवन गए भने कतिपय स्थानीय गाउँ बाग्दली, भालुखोला, धादिङ्गटोल बसाइँ सरेका छन् ।
सिमसार त एउटा प्रतिनिधि गाउँ मात्र हो । मकवानपुरगढी गाउँपालिकाका अधिकाँश दुर्गम वडाको हालत यस्तै छ । गाउँपालिकाका बुढीचौर, सुकौरा, आँपटार, आमभञ्ज्याङ्गलगायतका बस्तीमा अहिले थुप्रै घरहरु खाली भैसकेका छन् ।
यी सबै समस्याहरु मकवानपुरगढी गाउँपालिकाले नजीकबाट नियालिरहेको बताउँछन् गाउँपालिका अध्यक्ष विदुर हुमागाईं ।
‘म गाउँमा समस्या भएर मानिसहरु बसाइँ सरेका कुरामा विश्वास गर्दिनँ, बरु मानिसहरु बसाइँ सरिदिँदा गाउँमा समस्या भएको हो,’ उनी भन्छन् ।
हुमागाईंका अनुसार बढी जसो वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरुले आफ्नो परिवारलाई शहरमा सारेका छन् । बच्चाबच्चीहरुलाई पढाउने बहानामा पनि कतिपय शहर पसेको उनको भनाइ छ । तर, कुनै पनि बहानामा गाउँ छाड्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था नरहेको उनको दाबी छ ।
आफैंले फलाएको ताजा तरकारी, फलफूलहरु खाएर स्वच्छ वातावरणमा जीवन बिताउनु पर्नेमा मानिसहरु गाउँ छाड्दै हिँडिरहेकामा आफूलाई अनौठो लागेको बताउँछन् अध्यक्ष हुमागाईं ।
‘हामीले गाउँ गाउँमा सडक पु¥याएका छौं । खानेपानी, बिजुली, सिँचाइ गाउँलेहरुको जेजे माग छ, सक्दो सम्बोधन गरिरहेका छौं । यति हुँदाहँुदै पनि मानिसहरु आफ्नो जन्म र कर्म भूमिलाई किन माया मारिरहेका छन्, मैले बुझ्न सकेको छैन,’ अध्यक्षले भने ।
उनले गाउँपालिकावासीलाई गाउँमै बस्न, के खेती गर्ने हो गर्न, बाख्रापालन गर्न। फलफूल खेती गर्न वा आफूले चाहेको अन्य कृषि ब्यवसाय गर्न अनुरोध पनि गरे । त्यसमा गाउँपालिका जस्तोसुकै सहयोग गर्न तयार रहेको उनको भनाइ छ । रासस
बैंकरहरुले त्यो दिन मेरो चित्त नदुखाएको भए, म यति कठोर हुने नै थिइँनः गभर्नरको बिचार
श्रीमान् यसरी समाधान गरौं सुधीर बस्नेतको समस्या
स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको सेयर मूल्य अब के हुन्छ ? (प्राविधिक विश्लेषण)
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर सुरु गरेको केरा खेतीले करोडपति बने विष्णुहरि, कारमा सरर
बैंकका महंगा १० सीइओले लगानीकर्तालाई प्रतिफल चैं कति दिन्छन् ? यस्तो छ नालीबेली
बचतकर्ताको लगानी डुबाएपछि सिभिल ग्रुपका अध्यक्ष इच्छाराजले सहकारीसँग ऋण मागे (भिडियाे)
तपाईंसँग भएको नोट नक्कली हो कि सक्कली ? राष्ट्र बैंक भन्छ- यसरी चिन्नुहोस्